Laman web Abuuritaanka-ka WordPress waa sida dhisme guri leh leben Lego.
Waxaad aragtaa waxa aad rabto inaad ku guuleysato, qeexdo qaybaha lagama maarmaanka ah, oo ka dhig dhammaan wadajirta dhulka. Hase-yeeshe, caqabada koowaad, si kastaba ha ahaatee, waxay hubineysaa in wax walba ay ku habboon yihiin si siman iyo si aan kala go ‘lahayn.
Dalam catatan ini, waxaan isbarbar dhigi doonaa sare FTP (File Transfer Protocol) macaamiisha aad u isticmaali kartaa boggaaga WordPress.
0.4 3. FailZilla
Maanta, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa gundhig u sameynta jaangooyada WordPress, soo qaado mawduuc, oo aad abuurto nuxur adigoo adeegsanaya interface muuqaal ah. Waxa kale oo ay fududahay dalam lagu daro farsamooyinka iyo sii wado boggaaga adoo ka caawinaya plugins, kaas oo si toos ah loogu rakibay bakhaarka rasmiga ah ee WordPress.
Penanda Halaman Jiid-iyo-Jooji – Xayaysiinta waa muuqaal heer sare ah oo u sahli kara horumarinta inay diyaariyaan xisaabtooda FTP. Iyada oo CyberDuck ah, muuqaalka buuggu wuxuu isticmaalaa jiidis iyo kala-dhex-dhexaad ah – si sahlan loo isticmaalo heerarka cusub.
Cryptomator – Sabab kale oo loo doo CyberDuck waa in ay taageerto SFTP (Secure SSH File Transfer Protocol). Laakiin xitaa haddii aad rabto inaad la socoto FTP, waxaad wali ku sugi kartaa xogtaada Cryptomator app, taas oo kuu ogolaaneysa inaad abuurto waraaqo codsi ah oo ku saabsan pelayan kasta oo kasta ama hannaanka kaydinta daruuriga.
Dhamaynta Xeerka – Waxaa muhiim ah in la ogaado di tifaftiraha dhismaha ee nuqulkii lacagta la bixiyay uu ku yimid muuqaal gaar ah oo dhameystiran. Kaliya taasi ma badbaadin doonto waqti, laakiin waxay sidoo kale ka hortagi doontaa qaladaadka qalab ee keeni kara madax-xoqid la’aan.
Arkib Samee ZIP – Haddii aad u baahato inaad bogto boggaaga, waxaad ka faa’iideysan kartaa faylka hal-fure "FTP percuma" si uu u abuuro nuqullo ZIP ah oo loo diro wadooyinka maxalliga ah. Tani waxay hubineysaa inaad si dhakhso ah uga soo kaban kartid qaladaadka iyo faylasha khalkhalka leh.
Maamulaha Guryaha – FileZilla wuxuu la shaqeeyaa maamulaha goobta oo kuu ogolaanaya inaad keydiso macluumaadka boggaaga FTP. Waxay leedahay ikhtiyaari ah di la xiri karo xirmooyinka FTP, iyadoo la adeegsanayo aqoonsiyada login, iyo tilmaamida xiriirada SFTP.
Xaddidaadda Xawaaraha Khaaska ah – Haddii aad ka walwalsan tahay wareejinta FTP ee ku mashquulsan dhammaan xawaaraha internet-ka, waxaad dejin kartaa xaddidaadaha xawaareynta ee ka dhex socota bogga dejimaha FileZilla. Si tag fudud u ‘edit’> ‘Tetapan’> ‘Beddelka’ oo calaamadi "U oggolow xaddidaadaha xawaaraha".
Penyemak Imbas-Ku Saleysan – Adiga oo ah fidiye dheeraad ah, waxaad bilaabi kartaa isticmaalka Firaaqada Firfircoonida dhexdeeda. Kaliya waxaad ku dari kartaa isku-tooska tooska ah ee maktabadda fidinta dheeraadka ah ee Firefox-ka, waana fiican tahay inaad tagto.
Penapis Raadinta Fudud iyo – Antaramuka FireFTP waxaa ka mid ah baaritaan isku mid ah iyo fiilo filter kaas oo ku sameeya laybereeriyada gudaha iyo kan fogba isla markiiba. Waxay taageertaa xaddiga raadinta ee horumarsan sida calaamad bannaan (–) loogu talagalay ka-reebista faylka, calaamaddaha dheeraadka ah (+) alaabta loo baahan yahay, iyo qiimaha ("") raadinta kalmado badan.
Xawaaladaha Xawaaladaha – Macaamilka FTP ee Premium, gudbinta 4 wuxuu kufaraa xawaaraha sare ee gudbinta faylalka, kaas oo saacidaya qiyaasaha 4 ee faylasha yar yar ee 30,000. Macmiilku wuxuu kaloo isticmaalaa wareejinta isku xirka badan, taas oo sahlaysa in la dhaqaajiyo tiro fara badan oo faylasha ah iyada oo aan xawaaraynin.
Ikon Adat – Tani waxay noqon kartaa pertengahan muuqaal ah, laakiin gudbin jauh ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho sawirro gaar ah oo loogu talagalay "kuad kuwa ugu".
Sida bilawga adduunka ee macaamiisha FTP, ka dibna FireFTP iyo CyberDuck ayaa ah kuwa ugu murugsan fursadaha ugu wanaagsan. Ma aha oo kaliya inay fududahay in la isticmaalo, waxay wali bixiyaan sifooyin gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala bilaashka ah. FTP lacag la’aan ah sidoo kale waa doorasho fiican oo bilawga ah, laakiin kaliya haddii aadan daneynin wax kale oo aan ahayn marka aad galiso server-kaaga FTP.